Mudada ay sugayaan go’aanka dadka magangalyo doonka ah oo la soo gaabinayo | Somaliska
Nidaam cusub oo ay ku shaqeyn doonaan Laanta Socdaalka ee Iswiidhan ayaa soo gaabin doona mudada ay ku qaadato in qofka magangalyo doonka ah jawaab lagu siiyo. 3 bilood ayay qaadan doontaa Codsi ilaa Go'aan. "Hawsheenii ugu hormarsaneyd abid ayaa hada ka socota Laanta Socdaalka, oo ujeedkeedu yahay in dadka magangalyo doonka ah ay jawaab deg deg ah oo sharci ah helaan" Ayuu yiri Agaasimaha guud ee Laanta Socdaalka Dan Eliasson. Ayadoo la isticmaalaayo nidaam cusub oo shaqo, waqtiga ay codsiga ilaa go'aanka ay qaadato ayaa la yareyn doonaa ayadoo xaga sharcigana la wanaajindoono. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee nimaadka cusub waxaa ka mid ah. - hawlgal hore oo tayo leh. - Koox koox oo loo shaqeyn doono. - Xalinta Dhibaatooyinka - Waxbarid joogto ah. - Iyo la socosha xaalada. Qaabkaan cusub ayaa soo gaabin doona waqtiga ay ku qaadato Laanta Socdaalka baaritaanka ay ku hayaan qofka Magangalyo doonka ah. Nidaamkaan cusub ayaa waxaa la tijaabinaayay ilaa xagaagii la soo dhaafey ayadoo lagu tijaabiyay meelaha ay ka mid yihiin Gothenburg, Stockholm, Malmö and Boden. Laanta Socdaalka ayaa filaysa in wixii loo gaaro dhamaadka 2010 ay inta badan xarumahoodu ku shaqeyn doonaan nidaamka cusub. Nidaamkaan cusub ayaa waxaa wax ka maal galiyay Sanduuqa Dhaqaalaha Qaxootiga ee Midowga Yurub.
Mudada ay sugayaan go’aanka dadka magangalyo doonka ah oo la soo gaabinayo
Nidaam cusub oo ay ku shaqeyn doonaan Laanta Socdaalka ee Iswiidhan ayaa soo gaabin doona mudada ay ku qaadato in qofka magangalyo doonka ah jawaab lagu siiyo. 3 bilood ayay qaadan doontaa Codsi ilaa Go’aan.
“Hawsheenii ugu hormarsaneyd abid ayaa hada ka socota Laanta Socdaalka, oo ujeedkeedu yahay in dadka magangalyo doonka ah ay jawaab deg deg ah oo sharci ah helaan” Ayuu yiri Agaasimaha guud ee Laanta Socdaalka Dan Eliasson.
Ayadoo la isticmaalaayo nidaam cusub oo shaqo, waqtiga ay codsiga ilaa go’aanka ay qaadato ayaa la yareyn doonaa ayadoo xaga sharcigana la wanaajindoono. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee nimaadka cusub waxaa ka mid ah.
– hawlgal hore oo tayo leh.
– Koox koox oo loo shaqeyn doono.
– Xalinta Dhibaatooyinka
– Waxbarid joogto ah.
– Iyo la socosha xaalada.
Qaabkaan cusub ayaa soo gaabin doona waqtiga ay ku qaadato Laanta Socdaalka baaritaanka ay ku hayaan qofka Magangalyo doonka ah.
Nidaamkaan cusub ayaa waxaa la tijaabinaayay ilaa xagaagii la soo dhaafey ayadoo lagu tijaabiyay meelaha ay ka mid yihiin Gothenburg, Stockholm, Malmö and Boden. Laanta Socdaalka ayaa filaysa in wixii loo gaaro dhamaadka 2010 ay inta badan xarumahoodu ku shaqeyn doonaan nidaamka cusub.
Nidaamkaan cusub ayaa waxaa wax ka maal galiyay Sanduuqa Dhaqaalaha Qaxootiga ee Midowga Yurub.
asc dhamaan dadka isku howlay webkaan waad ku mahadsan tihiin shaqada aad qabataan laakiin waxan soo heedin lahaa in barnaamishyadiina aad balaarisaan kun soo dartaan maweelada caruurta iyo arimaha jaceylka mahadsanidiin dhamaantiin
March 18, 2011 at 09:46
asc dhamaan qorayaasha wbkaan mel kasta oo aad joogtaan lkn waxaan idiin sheegaa in waqtiyada salaadaha aad naga soo saxdaan waayo mar walba iyada aayn ku dukanaa lkn hada waa qaldan tahay fadlan naga saxa walaalalayaal kuna dadaala waayo awaa arin muhiim ah mahadsanidiin meel walboo aad joogtaan